လိင်စိတ်-Enhancer ဖြည့် - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
မှတ်ချက်: YBOP ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံဉာဏ်ကိုရှာဖွေရေးမှာသို့မဟုတ်မပေးပါဘူး။ အောက်ကအကြံပေးချက်များကို restart နေသောယောက်ျားထံမှ လာ. , သငျသညျသူတို့အဆိုမကြိုးစားမီသင့်ကိုယ်ပိုင်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူတို့နှင့်အတူစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
သင်သည်အခြားအဆင့်တွင်အလုပ်လုပ်သောချဉ်းကပ်နည်းကိုသင်ဖွင့်ပါကဤဆောင်းပါး၏အောက်ရှိလင့်ခ်တွင် homeopathy အကြောင်းကိုဖတ်ပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းရန်သင့်အားတိုက်တွန်းပါသည်။ အချိန်ယူရမည်၊ သို့သော်ရလဒ်များမှာပိုမိုတည်ငြိမ်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ နားလည်ပေးပါ porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အဓိကအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နေကြသည်။ ပြန်လည်နာလန်ထူဖိုရမ်များအပေါ်ယောက်ျားယူဆအဖြစ် dopamine သို့မဟုတ် dopamine receptors ၏ Downregulation အဖြစ်အကြီးစားတစ်အခန်းကဏ္ဍမည်မဟုတ်ပါ။
ငါ reboot ဖြစ်စဉ်ကိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာသိတယ်။ ဒါပေမယ့်မင်းခန္ဓာကိုယ်ကစိုက်ထူနိုင်စွမ်းရှိမရှိသေချာအောင်စစ်ဆေးဖို့လိုတာကိုငါမလုံလောက်ဘူး။
ကိုယ်မကြာသေးမီက, ငါသည်အနိမ့်လိင်စိတ်၏နာနေ၏ .. အဘယ်သူမျှမနံနက်သစ်သားနှင့်လူသတ်သမားအိပ်မပျော်တဲ့ဗီတာမင် / ဓာတ်သတ္တုစမ်းသပ်ယူခဲ့ပါတယ်။
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်၏ ZINC နှင့်မဂ္ဂနီဆီယမ်သည်အိမ်သာထဲတွင်ရှိနေသည်။ ကျွန်ုပ်ဖြည့်စွက်ပြီးပြီ - ကျွန်ုပ်သည်မည်မျှနိမ့်သည်ကို အခြေခံ၍ ၄ ပတ်မှ ၅ ပတ်အထိကြာလိမ့်မည် - ၄ ရက်အတွင်းအစာကောင်းများနှင့်နိုးနေပြီးဖြစ်သည်။ sux ဒါပေမယ့်အချိန်ယူရမယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ့အမှတ် .. ငါတစ်နှစ်လောက် rebooting ဖြုန်းတီး, ငါ O ပြီးနောက်ငါပြားချပ်ချပ်သွားနှင့် rewire တပြင်လုံးကိုအရာအဓိပ္ပာယ်မဘာကြောင့်အဘယ်ကြောင့်ထွက်တွက်ဆလို့မရဘူး ငါ 45 ပေါ့ ငါ ၁၀ နှစ်အရွယ်ကစပြီးငါ့ရဲ့ fetish မပြောင်းဘူး။ ဒါဆိုဘာကြောင့်ရုတ်တရက်အားလုံးဟာငါ့အတွက်ဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးလား။ ငါသွင့်ကိုညှစ်ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ငါရင်ပူပြီးအစာကြေနေတဲ့အစားအစာကနေကောင်းကောင်းမစုပ်ယူနိုင်ခဲ့ဘူး။ အရမ်းနိမ့်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့မပြောတတ်ဘူး။ ပြန်တည်ဆောက်ဖို့တစ်ရက်ကို ၁၀ အစာစားရမယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် .. ဦးလုံးကိုဖွင့်အချိန်အကျိုးစီးပွားအတွက်ထုတ် check လုပ်ထားနှင့်စိတ်ငြိမ်းချမ်းရေးရသင့်တယ်
L-dopa နှင့်ပါ ၀ င်သည့်အရာအားလုံးကိုရှောင်ပါ။ ကျွမ်းကျင်သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ် ဦး ၏စောင့်ရှောက်မှုအောက်တွင်မှ လွဲ၍ L-dopa ကိုဖြည့်စွက်ခြင်းသည်ကောင်းသောအကြံမဟုတ်ပါ။ အထီးကျန်ထားသော L-Dopa ပုံစံသည်ဆေးဘေးတွင်ဖော်ပြထားသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများစွာရှိသည်။ ကတ္တီပါ bean တွင်လည်း L-dopa ပါ ၀ င်သည်။
ရုပ်ရှင် နိုးထ L-dopa အကြောင်းကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ သူသည်ပါကင်ဆန်လူနာများအတွက်ခဏတာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးနောက်အလုပ်မလုပ်တော့ပါ။ အဓိကဇာတ်ကောင် (ဒီရုပ်ရှင်မှာမပြပါ) သူနာပြုများအားလုံးကိုစတင်ဖမ်းစားခဲ့သည်၊
ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းအိပ်မက်နှင့် / သို့မဟုတ်အိပ်မပျော်
အာရုံနှင့် / သို့မဟုတ်အမြင်အာရုံစိတ်အာရုံချောက်ခြားခြင်း
သင်ယူခြင်းအပေါ်သက်ရောက်မှုများ, အခြားအရှုပ်ထွေးလုပ်ဆောင်ချက်များကို impairing စဉ်ကအလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီးအချို့သက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်
Somnolence နှင့် narcolepsy
စိတ္တ stimulant ဆင်တူတစ်ဦးကအခွအေနေ
[ရှည်, အတန်ငယ်ကိုက်ညီမှု reboot လုပ်ပါထို့အပြင်] ငါတကယ်အကူအညီပြုထားတဲ့စိုက်ထူကော့တေးကိုယူ။
Ginkgo Biloba တိုင်းရင်းဆေးပင်
Panax ginseng ဟာ
Catuba အခေါက် (ဤတစျခု PIED များအတွက် fuck ဆိုတဲ့ shit ဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်အမှန်တကယ် dopamine ပြဿနာများနှင့်အတူကူညီပေးသည်။ ကျွန်မပြင်းပြင်းထန်ထန်ကကြိုးစားနေဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်။ )
ဒီဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများကိုဝယ်ခြင်း, အရာအားလုံးကိုကြိုးစားနှင့်မကျေနပ်သောစိတ်ရှိသည်ဖို့ပိုက်ဆံဖြုန်းရကျိုးနပ်သည်။ PIED ၏အဆိုးဆုံးအမှုအခင်းအနီးတွင်ကုသခဲ့သည်။ လူတိုင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်
ငါနေ့ရက်နှစ်ခုလုံးသီဟိုs်စားသူ (ိဗီတာမင် B12 နှင့်သွပ်ပမာဏများစွာပါသောသောက်စရာ) ကိုလည်းစားခဲ့သည်။ ရုတ်တရက်အားလုံးသည်ကျွန်ုပ်၏ကောင်လေးတွင်ဤထူးဆန်းသောခံစားမှုသည်သွေးကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်စီးဆင်းနေသောအလားခံစားခဲ့ရသည်။ ငါအနည်းငယ်အံ့သြသွားတယ် ဒါဟာ2ရက်အတန်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဒါကငါဒီလိုခံစားမှုမျိုးခံစားခဲ့ရတာကြာပြီ။ (သူသည် ၃၆ ရက်ကြာပြန်လည်စတင်လာသည်။ ပိုမိုအားကောင်းသောစိုက်ထုတ်မှုများကိုသတိပြုမိလာသည်။ ) လွန်ခဲ့သော (၃) ရက်ကကျွန်ုပ်သည်ဗီတာမင် B36၊ ဗီတာမင် B12၊ သွပ်နှင့်မဂ္ဂနီဆီယမ်ပမာဏအမြောက်အများကိုစားသုံးခဲ့ရပါသည်။ ငါတော်တော်နာမငြိမ်တဲ့ခြေထောက်တွေရှိခဲ့တယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကတဖြည်းဖြည်းရပ်နေကြတယ်။ တစ်နေ့လုံးဝပျောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ငါမျှော်လင့်တယ်။ ဒါဟာအကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ငါ့ကိုအတန်းထဲတွင်ပိုပြီးပုံမှန်ကြည့်ရှုစေ။
ငါအတိတ်ကာလကသွပ်, ginkgo နှင့် l-arginine ယူခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်နို ၀ င်ဘာလအစောပိုင်းကဤပြproblemနာနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်ထွက်ပေါ်လာသည်နှင့်စတင်ခဲ့သည်။ [ယခုမေလကုန်ပြီ] ငါသူတို့ကိုလအနည်းငယ်ကြာအောင်ခေါ်ယူခဲ့ပြီးလွန်ခဲ့သော ၃ လခန့်ကဖေဖော်ဝါရီလတွင်သူတို့ကိုရပ်လိုက်သည်။ သူတို့အကူအညီပေးတာမထင်ဘူး လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုမီ l-arginine ပမာဏအလွန်များပြားစွာသောက်သုံးနေသူများအကြောင်းကျွန်ုပ်ဖတ်ပြီးဖြစ်သည်။ ငါဒီလိုဆေးတွေတစ်ခါမှမသောက်ဖူးဘူး။ ငါပုလင်းပေါ်တွင်ရေးသားထားသည်သမျှသမျှကိုပြု၏။
ကျွန်ုပ်သည်ယခုကြားသိရသောငါးဆီကိုယူပြီးသင့်ကိုယ်ခန္ဓာ၏လည်ပတ်မှုနှင့်သင့်ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းမွန်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဘယ်သောအခါမျှ Viagra နှင့် cialis ဆေးများကိုဘယ်တော့မှ ယူ၍ မယူခဲ့ပါ၊ ဒါတွေကိုကျွန်တော်အကြံပြုမှာမဟုတ်ပါဘူး သူတို့သည်ပြtheနာကိုခေတ္တဖုံးကွယ်ထားပြီးမဖြေရှင်းပါ။ ငါထင်တာကတော့ sex enhancers အဖြစ်ကြော်ငြာထားတဲ့ဖြည့်စွက်ချက်တွေအားလုံးဟာ BS ပါ။ ပြီးတော့သူတို့ဟာတစ်နည်းနည်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်မယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်။
ကျန်းမာစွာစားပါ၊ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကောင်းမွန်သောပုံစံဖြင့်ထိန်းသိမ်းပါ။ ကြွင်းသောအရာသည်သဘာဝအတိုင်းလိုက်နာသင့်သည်။ မိမိအပြည့်အဝပြန်လည်နာလန်ထူမိမိအကောင့်ကိုဖတ်ပါ
ငါမကြာသေးမီကအချို့သောသွေးအမှုတို့ကိုပြုမိခဲ့သည်။ ငါမှာဗီတာမင် D ချို့တဲ့နေတယ်။ ငါမှာနယ်နိမိတ်အနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းရှိတယ်၊ ဒါကဗီတာမင် D နိမ့်ကျစေတယ်။ ဒါကြောင့်ငါ 5000IU vit နှင့်အတူဖြည့်စွက်တာပါ။ ကြောင်းကူညီပေးသည်လျှင်ကြည့်ရှုရန်: D ။
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်ချင်သောကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ဖြည့်စွက်ချက်အမျိုးမျိုးနှင့်မိမိကိုယ်ကိုလက်တွေ့စမ်းသပ်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံမှာသင်၏အထီးနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလှုံ့ဆော်ပြီးကုန်လွန်သွားပါက horney ဆိတ်ပေါင်းပင်၊ Tribulus maca၊ yohimbe စသည့်“ အထီးမြှင့်တင်ခြင်း” ထုတ်ကုန်အားလုံးသည်လုံးဝအသုံးမကျသည်။ ၄ င်းတို့သည်ထပ်တိုးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုရှာဖွေနေသည့်ပုံမှန်ကျန်းမာသန်စွမ်းသူများအတွက်မည်သည့်အကျိုးကျေးဇူးများဖြစ်စေမဖြစ်စေကျွန်ုပ်သည်အခြားသူများအားငြင်းခုံဆွေးနွေးပါမည်။
ဦးနှောက်ထိုကဲ့သို့သော citicholine အဖြစ် enhancers (dopamine အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆတိုးမြှင့်ဖို့ proported) နှင့်အခြားထိုကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်နဲ့ငါ့အတွေ့အကြုံကအတူတူပင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ serotonin စသည်တို့ကိုငါ့ကို bitchy aggitated သို့မဟုတ်စိတ်ဓာတ်ကျစေခဲ့သောတူညီသောရလဒ်အပေါငျးတို့သသွင်းယူမူကွဲမြှင့်တင်ရန် dopamine သို့မဟုတ် 5-htp မြှင့်တင်ရန်ထိုကဲ့သို့သောဌ-tyrosine သို့မဟုတ်ဌ-phenylalanine အဖြစ်အမျိုးမျိုးသော neurotransmitters ဖို့အမိုင်နိုရှေ့ယူပြီး။ သူတို့ကငါ့ကို0possitive ရလဒ်များကိုအပ်ပေးတော်မူ၏။
ယခုတွင်ငါသည်တစ်ခုပြီးသား overstimulated နှင့်ချိန်ခွင်လျှာစိတ်ထဲထဲက transmitter ကိုအဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်တစ်မီးပေါ်မှာပိုပြီးလောင်စာပစ်နဲ့တူကြောင်းယုံကြည်ကြသည်။ ငါ့အဘို့ကမကြာခဏငါ့ကိုတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနှင့်အတူပွော့မိမိကိုယ်ကိုခဲ့သည်။
အဆိုပါဖြည့်စွက်ဖို့ချွင်းချက်ရဲတဦးကိုအချည်းနှီးဆောင်ပုဒ်များမှာဂါဘမြို့သားများနှင့်မိုင်နိုအက်စစ်ဖြစ်ကြသည်။ ငါမိုင်နိုအက်စစ်ယူပြီးစတင် (နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်တစ် vasodialator ဖို့ precurser ဖြစ်သော) 1000mg3ကြိမ်နေ့စဉ် (နံနက်, မွန်းတည်နှင့်တစ်ဦးအချည်းနှီးသောအစာအိမ်အပေါ်အိပ်ရာမဝင်မီ) နှင့်ဂါဘမြို့သား 1000mg3ကြိမ်နေ့စဉ်နှင့်ရက်အတွင်းတစ်အံ့သြစရာခြားနားချက်သတိပြုမိသည်။ ဂါဘမြို့သားကအနည်းဆုံးအကြှနျုပျ၏ဦးနှောက်ထဲမှာချိန်ခွင်လျှာအကြောင်းကိုရောက်စေဖို့သလိုပဲဦးနှောက်နှင့်ငါ့အဘို့ inhibitor အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ အတော်များများကအခြားသူများက 3000mg ၏ဆေးညွှန်းမှာသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုလုပ်နိုင်ယုံကြည်နေချိန်မှာပါးစပ်ဂါဘမြို့သားနေ့စဉ်အသှေးကိုဦးနှောက်အတားအဆီးကိုဖြတ်ကျော်လို့မရဘူးနှင့်နေဆဲအခြားသူတွေက pituitary gland ကနေတဆင့်ဦးနှောက်တစ်ကျောတံခါးကိုတွေ့ယုံကြည်ပါတယ်။ ယုံကြည် ငါပိုကောင်းတဲ့အိပ်ခြင်းနှင့်ငါဆယ်ကျော်သက်ခဲ့ကတည်းကပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အကြှနျုပျ၏နေ့အတှငျး spontanious တစ်ပိုင်းစိုက်ထူရှိခြင်းစတင်ငါကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုသိရန်ဟန်ဆောင် dont ပေမယ့်ငါ့အဘို့ငါအေးဆေးတည်ငြိမ် လုပ်. ဗဟိုပြု။
ငါနှစ်ပေါင်းအမျိုးမျိုးသောဖြည့်စွက်ကြိုးစားနေခြင်းနှင့်အစဉ်အမြဲပွင့်လင်းစိတ်ကိုအတူဒါပေမယ့်မျှော်လင့်ခြင်းမရှိဘဲသူတို့အားယူပြီ။ ငါမဆိုလူ့နိုင်ပါတယ်အဖြစ်အကျိုးသက်ရောက်မှု plecebo မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဖြစ်ကိုယ်ခံစွမ်းအားစဉ်းစားပါ။ ငါ့အဘို့ဂါဘမြို့သားများနှင့်မိုင်နိုအက်စစ်အတူတကွအစွမ်းထက်ဆေးဝါးဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တစ်တွေပြန်ဖွင့်အဘို့အဘယ်သူမျှမအစားထိုးဖြစ်ကြသည်ဟုဆိုသည်ခံရတကား! ငါသို့သော်ငါ့ကိုကဲ့သို့သင်တို့မျိုးစုံစွဲလမ်းနှင့်အတူနှစ်ပေါင်းရုန်းကန်ခဲ့ကြဒါမှမဟုတ်သင်အနုတ်လက္ခဏာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆွေးနွေးချက်အားဖြင့်အနှောငျ့အအထူးသဖြင့်လျှင်, အထွက်ရှိတယ်သင်တို့တွင်အချို့သောကွာ reboot အဘို့သူတို့တစ်တွေရိုက်ချက်တန်ဖိုးရှိဖြစ်ကြောင်းထင်ကြဘူး။ အပြည့်အဝပြန်ဖွင့်.
ငါတော်တော်များများဖြည့်စွက်တာခံခဲ့ရပြီ rewire ဖြစ်စဉ်ကိုကူညီရန်။ အဆိုပါ3key ကိုဖြည့်စွက်နေ့စဉ် 30mg လီသီယမ် orotate (စိတ်ဓါတ်များကူညီပေးသည်နှင့်မီးခိုးရောင်ကိစ္စပေါက်), DHA အာရုံငါးကိုဆီ 1000mg3ကြိမ်နေ့စဉ် (ဦးနှောက်ဒီတော့ငါကသစ်ကိုလမ်းကြောင်းဘို့အကောင်းတစ်အဆောက်အဦပိတ်ပင်တားဆီးမှုပါလိမ့်မယ်တွက်ဆ 60% DHA ဖြစ်ပါတယ်), နဲ့ L များမှာ -Glutamine (စွဲလမ်းတပ်အဘို့ကောင်းသော) ။
ဂျင်ဆင်းသည်ကျွန်ုပ်၏လိင်စိတ်ကိုတိုးစေပြီး PMOF နှင့် reboot လုပ်ရန်ကြိုးစားနေစဉ်တွင်ကောင်းကျိုးဖြစ်စေမည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ သင်ကဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ဖတ်ရှုပြီးသည်နှင့်အလွန်စိတ်ဝင်စားပါကရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာကြိုးစား။ တစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ရပ်ရန်အကြံပေးလိုပါသည်။ သင်ဖတ်ပြီးသည်နှင့်အမျှ၎င်းကိုစက်ဘီးစီးရန်လိုအပ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်လက Ayurveda ဆေးဆိုင်ကိုငါတွေ့ခဲ့ပြီး Ashwagandha ကိုစမ်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ငါ Ashwagandha ဆေးတောင့် ၄ ချပ် (ဆေးတောင့် ၄၀) ကိုဝယ်ယူခဲ့ပြီးနေ့စဉ် ၂ ကြိမ်သောက်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမအပတ်အတွင်းမှာကျွန်တော့်ရဲ့စိုက်ထူမှုပိုမိုအားကောင်းလာတယ်။ အမြဲတမ်းချောင်နေတဲ့ကျွန်တော့်ရဲ့ခြစ်ရာခဲယဉ်းလာတယ်၊ နှင့်သုက်ထူ (ငါ့ပထမ ဦး ဆုံးသုတ်ရည်ခြင်းကဲ့သို့) ထူကြောင်းသတိပြုမိခြင်းနှင့်ငါသုတ်ရည်လွှတ်ပြီးနောက်အပြီးစိုက်ထူရှိသေးသတိပြုမိ, ငါကိုလည်းစိုးရိမ်ပူပန်မှု၏ရောဂါလက္ခဏာတွေမရှိတော့ဖြစ်ကြောင်းကိုသတိပြုမိ, ငါဒီဆေးပင်ကိုယူစဉ်ငါရက်ပေါင်း4သာဆေးတောင့ခဲ့ ဆက်လက်၍ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း (တစ်ပါတ် ၂ ကြိမ်)၊ ယခုတွင်တစ်ပါတ်ရှိပြီ၊ ကျွန်ုပ်တွင်ဆေးတောင့်များမရှိတော့ပါ၊ ယနေ့ကျွန်ုပ်သည်နံနက် ၅ ကြိမ်သာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊ ယခုညနေခင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ခိုင်မာသည့်စိုက်ထူမှုကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ pic, ဤအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်အပြစ်ရှိသည်ဟုမခံစားမိပါ။ ကျွန်ုပ်နှင့်တစ်ခါမျှမကြုံဖူးပါ။ အမှန်မှာဤသည်မှော်ဆေးပင်ဖြစ်သည်။ ပြန်လည်နာလန်ထူလိုသူအားလုံးသည်ဤဆေးပင်ကိုစမ်းသပ်သင့်သည်။ အမှုန့်နှင့်ဆေးတောင့်၌ရရှိနိုင်သည်။
ပြီးတော့ Ayurveda တွင် Shilajit ဟုလူသိများသော ပို၍ အစွမ်းထက်သည့်နောက်ထပ်အရောအနှောတစ်ခုရှိသည်။ ငါ Shilajit ကိုမစမ်းခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့် Ashwagandha ကငါ့အတွက်တကယ်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်၊ ဒီနေ့ငါပဲ ashwagandha ၈ ချပ် (ရက်ပေါင်း ၄၀) သာ ၀ ယ်ခဲ့တယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ဒီရက် ၄၀ အတွက်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာမျိုးမရှိတော့ဘူး၊ ရက်ပေါင်း ၄၀ မှာရလဒ်တွေကိုငါတင်မယ်။ ဒါ့အပြင်ငါမဆိုအထူးသဖြင့်အမှတ်တံဆိပ်ကြော်ငြာမဟုတ်ပါဘူး။
Supplementwise ငါအိုမီဂါ 3s ၏အံ့သြဖွယ်ပါဝါတွေ့ပြီ။ အတန်ငယ်ကျန်းမာရေးခွံမာသီး၏သကဲ့သို့ငါဘေးဖယ်နေတဲ့ပေါင်းစုံ / ဗီတာမင်ဃထဲကနေ theyre များသောအားဖြင့်အများဆုံး reccomended ယေဘုယျဖြည့်စွက်အဖြစ်တစ်လျှောက်လူအပေါငျးတို့၏သိတယ်။ ငါသည်ငါ့ကျန်းမာရေးကိုအဘယ်သူမျှမအပြောင်းအလဲများနှင့်အတူလွန်ခဲ့သည့်အတွက်သူတို့ကိုနည်းနည်းကြိုးစားခဲ့ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်းငါသည်ကြာမြင့်စွာအလုံအလောက်တစ်ခုသို့မဟုတ်ကြီးမားသောလုံလောက်အောင်ထိုး၌သူတို့ကြိုးစားခဲ့ဘူး။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကျနော်နေ့စဉ်တစ်ဦးဆေးဝါးတန်းငါးရေနံ (400mg EPA / 200mg DHA),2ဆေးပြား 3x ယူပြီးစတင်ခဲ့သည်။ အကြှနျုပျ၏စိုးရိမ်စိတ်, ငါသည်လုံ့လရှိသူ, ပိုပြီးစိတ်အေးလက်အေးခံစားလျော့နည်းဦးနှောက်မြူထိုးကျလာခဲ့တာနှင့် ထွက်. ပျော်စရာရှိသည်အစားတစ်ဦးအိပ်ချင်မူးတူးအတွက်ညဉ့်လုံးအတွင်း၌ထိုင်လိုသောသိရသည်။ ငါအိုမီဂါ3/6၏ကြီးမားသောဆယ်လူလာမညီမမျှခဲ့လျှင်အတိတ်ကာလ၌ငါ၏အစားအသောက်နှင့်ကျန်းမာရေးအလေ့အထအပေါ်အခြေခံပြီးငါမှာအားလုံးအံ့အားသင့်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
စိန့်ဂျွန်ရဲ့ Wort ကိုယူပြီးငါနှင့်ငါ့အလုပ်။ ထိုဆေးများသည်သင်၏ dopamine ကိုတိုးပွားစေသည်။
တစ်ခုခုဖြစ်ရင်ဂျင်ဆင်းနဲ့တူတဲ့ tonifying herb ကိုတိတိကျကျ libido တိုးမြှင့်ပေးတဲ့ဆေးကိုအကြံပြုပါလိမ့်မယ် (libido တိုးခြင်းသည်ဂျင်ဆင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်အဓိကမဟုတ်) သင်၏လိင်စိတ်သည်အချိန်မီပြန်လာလိမ့်မည်၊ ၎င်းကို၎င်းသည်၎င်း၏သဘာဝဖြစ်စဉ်ကိုဖြတ်သန်းသွားရန်လိုအပ်သည်။ ဂျင်ဆင်းသည်သင်၏စွမ်းအင်ဖြည့်တင်းရန်နှင့်သင်၏ချို့တဲ့သောနေရာတွင်ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်သင်၏တင်ပါးဆုံတွင်းအင်ဂျင်တွင်ပြန်လည်အားဖြည့်ရန်ကူညီသည်။ နည်းနည်း၊ တစ်ပတ်လျှင်နှစ်ပတ်၊ တစ်ပါတ်သို့မဟုတ်တစ်ပတ်အကြာပြန်လုပ်ပါ။ သင်ချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုခံစားရသည်အထိမယူပါနှင့်၊ ၎င်းသည်ရေရှည်မဟာဗျူဟာဖြစ်သင့်သည်။
ငါနေ့စဉ် Multi- ဗီတာမင်နှင့် Ginkgo Biloba ဖြည့်စွက်၏အများဆုံးထိရောက်သောနေ့စဉ်ဆေးထိုး (240mg) ကိုစတင်ခဲ့သည်။ multivitamin အများကြီးလုပ်သလိုမျိုးငါမခံစားရဘူး၊ ဒါပေမယ့် GB ကိုယူပြီးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာမှာကျွန်မရဲ့မနက်ခင်းစိုက်ခင်းဟာပိုပြီးခိုင်မာပြီးအားကောင်းလာတယ်လို့သတိပြုမိခဲ့တယ်။ GB သည်စိုက်ထူနေစဉ်အတွင်းလိင်တံထဲသို့သွေးများပိုမိုများပြားစေမည့်သေးငယ်သည့်သွေးကြောများနှင့်ဆံချည်မျှင်သွေးကြောများအားလျော့စေသည်။ ထပ်တိုးအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်သိမြင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုသိသိသာသာတိုးလာကြောင်းကိုလည်းသတိပြုမိခဲ့သည်။
ငါ Ginkgo Biloba ကိုစတင်လေ့လာသည့်အခါကျွန်ုပ်သည်အနည်းငယ်သုတေသနပြုခဲ့ပြီး၊ ဂျူရီလူကြီးများအနေဖြင့်ယခုထိတိုင်ရှိနေသေးသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ လေ့လာမှုအတော်များများက GB ဟာကိုယ်ခန္ဓာကိုသိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်စေတယ်ဆိုတာကိုပြပြီးအခြားသူတွေက ED နဲ့အခြားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒါမှမဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာတွေအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိဘူးဆိုတာပြသခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားမိသည်မှာ ပို၍ ရှင်းလင်းစွာတွေ့မြင်နိုင်ကြောင်းသင်ကိုယ်တိုင်ပြောပြနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ပေါင်းပင်နှင့် PMO ကိုဖြတ်ခြင်းမှလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာပြီးသည့်နောက်ကျွန်ုပ်၏စိုက်ထူမှုများသည်ပိုမိုအားကောင်းလာသောအခါငါမှတ်မိသေးသည်။ ဒါကြောင့်အနည်းဆုံးကြိုးစားရကျိုးနပ်ပါတယ်၊ ၎င်းတို့ကိုများသောအားဖြင့် ၈၀ မီလီဂရမ်ဆေးပြားများဖြင့်ရောင်းချကြသည်။ ကျွန်ုပ်သည်တစ်နေ့လျှင်သုံးကြိမ်သောက်လေ့ရှိပြီးအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်တစ်နေရာရာကို (ဘယ်နေရာကိုမမှတ်မိနိုင်ပါ) ၂၄၀ မီလီဂရမ်သည်အများဆုံးထိရောက်မှုရှိသောနေ့စဉ်ဆေးဖြစ်သည်။
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော ဇင့်ချို့တဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးမှု။ တစ်ဦးဖြည့်စွက် regimen အပေါ်စတင်မတိုင်မီအသှေးကိုအဆင့်ဆင့်စစ်ဆေးဂရုစိုက်ပေးပါ။ အစားသွပ်ကြွယ်ဝသောအစားအစာများနှင့်အတူစမ်းသပ်ဖို့ကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုလုံခြုံ။
မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်သည်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းပါ ၀ င်သည့်ဆုတ်ခွာခြင်းလက္ခဏာများနှင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ရုံသာမကကျွန်ုပ်ဘဝ၏အခြားရှုထောင့်များကိုပါအကျိုးရှိစေသည့်အရာတစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အခြေခံအားဖြင့်ကောင်းမွန်သောမှတ်တမ်းတင်ထားသည့်သမိုင်းဝင်စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုအောင်မြင်စွာကုသနိုင်သည့်ဆေးပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို St John's Wort ဟုခေါ်ပြီး၎င်းကိုလက်ဖက်ရည်အဖြစ်ထုတ်လုပ်ရန်၎င်းကိုငါဝယ်သည်။ St. John's Wort ဆီဆီဖြူအဖြစ်အပင်တစ်ပင်ကို ၀ ယ်လိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်လက်ဖက်ရည်လောက်ထိရောက်တဲ့ဆေးတောင့်ဗားရှင်းလောက်မတွေ့ရဘူး။ ဒီဆိုဒ်များမှစာမူများစွာကိုဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့်လူများစွာသည်အပျက်သဘောအတွေးများနှင့်အပျက်သဘောအတွေးများကိုခံစားနေကြရသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ၄ င်းတို့၏ဆုတ်ခွာမှုလက္ခဏာများကိုစိတ်ဖိစီးမှု၊ စိုးရိမ်ခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းစသည်တို့ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာများအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီး၊
ဒါနဲ့ငါယောက်ျားတွေကိုမင်းနဲ့ဝေမျှဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုလေးလေးနက်နက်နဲ့ဒါဟာ ၁၈၀ ဒီဂရီအလှည့်အပြောင်းပဲ။ ငါကအေးအေးဆေးဆေးနေဖို့၊ ကျွန်မရဲ့ libido ကိုမသတ်ဘဲတွန်းအားတွေကိုကိုင်တွယ်နိုင်စွမ်းလည်းတိုးလာတယ်။ တကယ်တော့ငါဒီယူပြီးကတည်းကအတော်လေးသွက် libido ကြုံနေရပါပြီ။ ငါစိတ်ကျရောဂါသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှု၏ဘုံလက္ခဏာ (စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအကြားခိုင်မာတဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိပါတယ်) libido လျှော့ချငါသိ၏။ ဤလက်ဖက်ရည်သည်ကျန်းမာသောစိတ်ကိုမြှင့်တင်ပေးပြီးအသည်းရောဂါအတွက်ကောင်းကျိုးဖြစ်စေနိုင်သည်။
ဒီတော့သူတို့အမြင့်မားတဲ့နှစ်ဆဂဏန်းနှင့်သုံးဆဂဏန်းပို်ရောက်ရှိဆဲတစ်ဦး reboot ၏အကျိုးကျေးဇူးများကြုံနေရပြီမဟုတ်သောသူအပေါင်းတို့သည်လူများတို့အား, St John Wort တစ်ဦးပါပေးပါ။ ထိုတစ်ဦးချင်းစီပေမယ့်အနုတ်လက္ခဏာနှင့်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောသင့်ရဲ့တစ်နေ့တာဖျက်ဆီးအကြံအစည်, ဒါမှမဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုပြဿနာတစ်ခုရှိရာသူတို့၏အမျိုးအစဉ်ဆက်မပြတ် bombardments ခံစားနေရသူမည်သူမဆိုမသာ။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးပါပေးပါ။
နောက်ထပ်ယောက်ျားတစ်ယောက်ကဆက်ပြောသည်: ဤသည်ကျိန်းသေအကြီးအမြက်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဦး နှောက်ထဲမှာ serotonin ကိုတိုးမြှင့်ဖို့ထင်တဲ့ Rhodiola နဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက်ကငါအောင်မြင်ခဲ့တယ်။ ငါတနေ့ 1000mg ယူထင်ပါတယ်။ ငါ St. John's Wort ကိုစမ်းသုံးကြည့်မယ်
အိုမီဂါ 3: တစ်ပြောင်းလဲမှုခံစားရပါဘူး။ အိုမီဂါ 3-6-9: ခုပဲပြောင်းလဲမှု, ပိုကောင်းတဲ့ဆံပင်, အသားအရေ, လက်သည်း, တောက်ပ eyes.5-htp: တဲ့အခါမှာ im စိတ်ဓာတ်ကောင်း, Johns wort though.st ငါ့ကိုပင်ပန်းစေသည်: အဆိုပါဆေးပြားငါ့အပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ကြားတွင်, ဒါပေမယ့်ငါနဲ့တူပြုပါ လက်ဖက်ရည်။ ငါ့ကို calm.Maca စေသည်: ငါပိုပြီးစွမ်းအင်ရပိုကောင်းလုံ။ မြေတပြင်လုံးအစားအစာများနှင့်အတူ concentrate.Multivitamins ဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူ: ကောင်းမွန်သောပစ္စည်းပစ္စယ, ငါသည်အများသောအားဖြင့်ကျွန်မနာရီစုံတွဲတစ်တွဲအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြသည့်အခါနေ့လည်ပင်ပန်းရ။ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ငါကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အစာကိုစားလေ့ (တစ်စုံတစ်ဦးကငါ့ကို gf ရ) ဒါကြောင့်ဒီရွှေက၎င်း၏အလေးချိန်ကျိုးနပ်သည်။ ငါဆန့်ကျင်၎င်းသည်အောက်စီဂျင်ဓာတ်ပေါင်းများရှိပါတယ်တဲ့သူတွေကိုရယူပါ။
လွန်ခဲ့သော ၃-၄ ပတ်အတွင်းကျွန်ုပ်၏အစားအသောက်များကိုသန့်ရှင်းရေးနှင့်ဗီတာမင်များသောက်သုံးခြင်းစတင်ခဲ့သည်။ “ Green Vibrance” လို့ခေါ်တဲ့ဂျုံမြက်မှုန့်ကိုကျွန်တော်အကြံပြုလိုပါတယ်။ နံနက်ယံ၌၎င်း (ငါ၎င်းကိုဗီတာမင်ရေနှင့်ရောစပ်) ယူပါ။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်စွမ်းအင်နှင့်လိင်စိတ်ကိုသိသိသာသာတိုးတက်လာလိမ့်မည်။ မည်သည့်ဗီတာမင် shoppe သို့မဟုတ် gnc မှာကရယူပါ။ သို့သော်သတိပြုပါ၊ အကယ်၍ သင်သည်ဤဖြည့်စွက်ဆေးကိုစတင်သုံးစွဲပါက၎င်းကိုသောက်ပြီးနောက်တစ်နာရီ၊ နှစ်နာရီကြာအိမ်သာတစ်ခုအနီးတွင်ရှိနေရန်သေချာပါစေ။ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်အစိမ်းရောင်များကိုအသုံးပြုရန်တစ်ပတ်သို့မဟုတ်နှစ်ပတ်ကြာသည်။ လွန်ခဲ့သည့်လကစံနမူနာယူထားသောဗီတာမင်မျိုးစုံဖြစ်သော B3 ငါးဆီနှင့် St. John's wort တို့ကိုပါသောက်သုံးခဲ့ဖူးသည်။ စွမ်းအင်နှင့်စိတ်နေစိတ်ထားသိသိသာသာတိုးတက်ပါပြီ အိုး၊ ငါလည်းကဖင်းဓာတ်ကိုအကြီးအကျယ်ဖြတ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ငါဖြတ်ပြီးကတည်းကအတက်အကျတွေလျော့နည်းလာတယ်။ ဒါပေမယ့်ကဖိန်းဓာတ်ထုတ်ယူခြင်းကိုသတိပြုပါ။
ဒီတော့ဒီမှာငါသည်ငါ့ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာတွေသက်သာရန်အလို့ငှာ၌ငါ့ PMO စဉ်အတွင်းစမ်းသပ်ပြီးအနည်းငယ်ဖြည့်စွက်အပျေါမှာငါ့ပုဂ္ဂလဒိဋ္အမြင်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါသည်သူတို့၏တစ်ဦးချင်းစီရေတိုရေရှည်ထိရောက်မှုတို့ကိုစစ်ကြောစီရင်နိုင်အောင်ငါသီးခြားစီသူတို့ကိုခေါ်သွားတယ်။ သူတို့ထဲကအများစုဟာပြီးသားပေါ်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ပြီ https://www.yourbrainonporn.com/libido-balancing-supplements.
1) Ashwagandha (Withania somnifera): ဒါဟာငါ့ကိုပိုပြီးမျှမျှတတခံစားမိလုပ်, ငါ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုလျှော့ချ။ သောက်သုံးသော: တစ်နေ့လျှင် 1 ဂရမ်စင်ကြယ်သောအမှုန့်
၂) Mucuna pruriens - ဒါကကျွန်မရဲ့စိုးရိမ်စိတ်ကိုလျော့နည်းစေပြီး၊ (၁ ဂရမ်) သောက်ခြင်းအပေါ် မူတည်၍ ခဏတာပျော်ဝင်စေခဲ့သည်။ (၅ ဂရမ် - ဒီဆေးပမာဏကိုငါစမ်းကြည့်ခဲ့တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဆေးသောက်တဲ့အချိန်မှာသိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုတစ်ခုရှိခဲ့ပေမဲ့) တစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားရည်ရွယ်ချက်သည်။ dopamine ၏ရှေ့ပြေး L-dopa ပါသောကြောင့်သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ဤဖြည့်စွက်ဆေးကိုရေရှည်မသောက်လိုပါ။
(၃) ၇-Keto-DHEA - ကျွန်ုပ်၏ခံစားချက်နှင့်အထွေထွေသုခချမ်းသာအပေါ်ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမျှသတိမပြုမိခဲ့ပါ။
4) SAM ကို-e: က ashagwanda အဖြစ်အလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့တူသောငါခံစားရတယ်။ ကပျိုးပင် ashagwanda မှဆန့်ကျင်အဖြစ်ကောင်းမွန်စွာသတ်မှတ်ထဲကဓာတုပစ်စညျးဒြပ်ပေါင်းသည်အတိုင်း, ငါမဟုတ်တော့အသုံးပြုရန် ashagwanda ကျော်ကဒီပိုနှစ်သက်မယ်လို့
ADRENAL FATIGUE - ဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်များအပြန်အလှန်လဲလှယ်ခြင်း - အရင်ကဒီဖြည့်စွက်မှုနဲ့ကျွန်တော်အောင်မြင်ခဲ့တယ်။ http://www.amazon.com/Nutri-West-DSF-FORMULA-120/dp/B000NI81UA
စိတ်ဖိစီးမှုတွေများပြီးနောက်မှာသင့်ရဲ့ adrenals ကိုဖြည့်ပေးတယ်။ လူအများစုအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ (ဆေးညွှန်းမဟုတ်ပါ) ။ ဒါပေမယ့်မင်းကဆရာဝန်နဲ့စစ်ဆေးပြီးစကားမပြောနိုင်သောအရာများကိုပြုလုပ်သင့်တယ်။ Vit-D3 ဖြည့်စွက်စာကိုလည်းသင်စဉ်းစားမိနိုင်သည်။
ငါ့မှာ Adrenal ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေတယ်။ ငါသည်သင်တို့ကိုကျန်းမာစေပါလိမ့်မယ်အရာစာအုပ်ဂျိမ်းစ် Wilson က Adrenal ပင်ပန်းနွမ်းနယ်, အလွန်အမင်းအကြံပြု
စာအုပ်ကိုဝယ်ပြီးအနီးကပ်အကြံဥာဏ်ကိုလိုက်နာပါ။ allopatic ဆရာဝန်များအကြောင်းကိုမေ့လျော့သူတို့အများကြီးကူညီလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ မင်းငွေအများကြီးဆုံးရှုံးလိမ့်မယ်…
စာအုပ်တွင်ဖော်ပြထားသောလုပ်ဆောင်မှုများကို (ဗီတာမင်၊ သတ္တုဓာတ်နှင့် adrenal ထုတ်ယူမှု) + တွင်ဖော်ပြထားသည့်ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများကို ၀ ယ်ပါ။ ၁ နှစ်ခန့်အကြာတွင်သင်ပိုမိုကောင်းမွန်လာလိမ့်မည်။ သကြားနှင့်ဂျုံမှုန့်စွဲခြင်းကိုရပ်တန့်ပါ။ ဒီစာအုပ်ကမင်းဘဝကိုပြောင်းလဲစေလိမ့်မယ်၊
ငါ citicoline, AMA သုံးပြီးနှစ်ရက်၌ငါ့ကိုယ်ပိုင် DE ကုသပေးခဲ့၏။
ကျွန်ုပ်သည်အာရုံကြောဗေဒပညာရှင်ဖြစ်ရန်လေ့လာနေသည့်ဆေးကျောင်းသားတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ငါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အာရုံကြောရောဂါနှစ်ခုလုံးကုသရန် nootropic ဖြည့်စွက်အသုံးပြုခြင်းအတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စားမိပါတယ်။ DEF ဝေဒနာခံစားနေရပြီးနောက် (NoFap) နှင့် / Pornfree တို့နှင့်အတူကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်ကို Citicoline (CDP-choline ခေါ်) ဖြင့်ဖြည့်စွက်ခြင်းသည် ၅ နှစ်ကျော် DE ရောဂါခံစားခဲ့ရပြီးနောက်ကျွန်ုပ်ကိုကုသပေးခဲ့သည်။ မင်းတော်တော်များများလိုပဲငါငယ်ရွယ်စဉ်၊ နေ့စဉ် PMO မှာ porn ကိုစကြည့်တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်သုတေသနအချို့ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး CDP-Choline ကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်၏ dopamine စနစ်ကိုမြန်မြန်ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ဒီမှာကျုပ်ရဲ့ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုပါ။ မည်သည့်စွဲလမ်းမှုနှင့်မဆိုကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်၏ dopamine ဆုိုင်ရာ circuit ကို aberrant process မှပြန်ပေးဆွဲသည်။ ၎င်းသည်ကိုကင်း၊ ဘိန်းဖြူ၊ ဆေးခြောက်၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသို့မဟုတ်ရေခဲမုန့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဦး နှောက်၏ mesolimbic / mesocortical (အပျော်အပါးရှာသောဒေသများ) တွင်ကြီးမားသော၊ ဒီ dopamine အလုအယက်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအလွဲသုံးစားပြုပြီးနောက်စွဲလမ်းမှုသည်မြင့်တက်လာခဲ့ပြီး DE သည်အဓိကအကြောင်းပြချက်နှစ်ခုကြောင့်ဖြစ်သည်။
၁။ Nucleus Accumbens နှင့် Ventral Tegmental inရိယာရှိ Dopamine receptors များသည်ပုံမှန်အားဖြင့် synapse မှာ dopamine ပါဝင်မှုများနေတဲ့အဆက်မပြတ်အဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေသောကြောင့်ပျက်စီးသွားပြီး၊
2 ။ ) dopamine ၏အောက်ပိုင်းအဆင့်ဆင့်ကြောင့် Coolidge Effect ဖို့အချိန်ကျော်လှုံ့ဆော်မှု (PMO) မှတုံ့ပြန်မှုအတွက်ဖြန့်ချိနေကြပါတယ်။
သင့်ရဲ့ခေါများအတွက်တူညီပေါက်ကွဲသံကြီးရနိုင်ဖို့အတွက်ကိုသင်ထိရောက်စွာ dopamine တစ်ခုအစဉ်အဆက်ကျုံ့စတိုးကနေဆွဲ, မြင့်လောင်းကြေးတွန်းဖို့ရှိသည်။ CDP-Choline သို့မဟုတ် Citicoline အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောနှစ်ခုဖြစ်စဉ်များတန်ပြန်ရန်ဆောင်ရွက်သည်။ ဤတွင်ဤရရှိပုံကိုရှင်းပြနှစ်ခုစာတမ်းများနေသောခေါင်းစဉ်:
dopamine receptors ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် synaptic dopamine ကိုတပြိုင်နက်တိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့် PMO ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဖြစ်စဉ်ကိုသင်ပြောင်းပြန်လုပ်လိုက်တယ်။ ငါဘာသတိထားမိလဲ sensitivity ကိုတိုးမြှင့်ခြင်း, PIV ကိုလိုလားခြင်းနှင့် PIV အတွင်းရှိအော်ဂဇင်ကိုစိတ်ပညာအရ“ the hump ကျော်” ရနိုင်ခြင်း။ သင်သည်မည်သည့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအစားအစာများသိုလှောင်ရုံသို့မဟုတ် Amazon တွင်မဆို Citicoline ကိုရနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကောင်းစွာလေ့လာပြီးအလွန်ကောင်းမွန်စွာခံယူထားသည့်အရာဝတ္ထုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်စာရင်းပြုစုထားသည့်အရာများထက် ကျော်လွန်၍ အကျိုးကျေးဇူးများရှိသည်။ ဒါကိုစမ်းကြည့်ချင်စိတ်ရှိရင်ဒီဘုတ်အဖွဲ့ပေါ်မှာရေးဖို့အားလုံးကိုတိုက်တွန်းပါတယ်။ ငါကငါ့အဘို့အလုပ်လုပ်ခဲ့ကိုငါသိ၏။ ငါဟာအလုပ်မှာ placbo အကျိုးသက်ရောက်မှုထက်မကပဲမျှော်လင့်ပါတယ်…မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်သည်ရလဒ်အချို့ကိုကြားရန်မစောင့်နိုင်ပါ။
ED များအတွက် L ကိုမိုင်နိုအက်စစ် + Pycnogenol
ငါ (ငါကနှစ်အနည်းငယ်အတော်လေးအများကြီး) porn- သွေးဆောင် ED ရှိသော်လည်းငါနောက်ဆုံးတော့ငါ့ကိုအလုပ်လုပ်ငါ့အဘို့အချို့ဖြည့်စွက်တွေ့ရှိခဲ့ကွောငျးသင်ယောက်ျားတွေသိစေချင်တယ်။ ငါအများကြီးကွဲပြားခြားနားသောဖြည့်စွက်ကြိုးစားနေပြီးနောက်တကယ်စိတ်ဓာတ်ကျဖို့စတင်ခဲ့သည်နှင့်သူတို့ထဲကအဘယ်သူမျှမအလုပ်လုပ်ပုံရသည်။ မကာအို၊ ချိုသောဆိတ်ပင်၊ Arginmax၊ သံမဏိလိင်စိတ်၊ l-arginine, l-arginine + citrulline, l-tyrosine, ginko biloba, ငါးဆီ၊ multivitamins စသည်တို့ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်သင်သောက်ပြီးနောက်မည်သည့်အရက်ကိုသောက်သုံးပါကအလွန်ဆိုးရွားလှသောချွေးများဖြစ်သည်။ L-Arginine နှင့် Pycnogenol တို့တွင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမရှိပါ။ ထို့အပြင်သင်၏ system တွင်သူတို့နေထိုင်စဉ်ကတည်းကသူတို့ကိုလိင်ဆက်ဆံရန်အလျင်စလိုမလိုအပ်ပါ။ သုံးရက်သာကြာပြီးတဲ့နောက်မှာငါဟာအချိန်ကြာမြင့်စွာရရှိခဲ့တဲ့အကောင်းဆုံးစိုက်ထူမှုတွေရှိပြီးသား။ ကျွန်တော့်အတွက်အသက်အရွယ်မမီသေးတဲ့ခဲယဉ်းပြီးတောက်ပတဲ့ကျောက်သား။ ဒါ့အပြင်ငါက porn မပါဘဲတက်ရနိုင်, ငါဘယ်တော့မှမအောက်မေ့နိုင်ကတည်းကကတည်းကငါမလုပ်နိုင်, နှင့်စာသားသည်ဤဖြည့်စွက်နှစ်ခုယူပြီးပြီးနောက်စာသားငါနိုင်ခဲ့တယ်။
Ginkgo Biloba တိုင်းရင်းဆေးပင်ထုတ်ယူကြွက်များတွင် noncontact စိုက်ထူပိုကောင်းစေပါတယ်: များ၏အခန်းကဏ္ဍ dopamine အဆိုပါ paraventricular နျူကလိယနှင့် mesolimbic စနစ်။
ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ nicotinamide အက်ဒနင်း dinucleotide ဖော့စဖိတ်-diaphorase လှုပ်ရှားမှုနဲ့အန်ဒရိုဂျင် receptor များအပေါ် Tribulus မြေပြင်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ (မာရ်နတ်ပေါင်းပင်)
မဖြစ်နိုင်တာ PIED ငါ့လာမယ့်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသ !!!!!
Thu အပေါ် Shaz အားဖြင့် Submitted, 09 / 27 / 2018 -M
ဒါနဲ့ပွဲတစ်ပွဲ pied ၏အဆိုးဆုံးပေါ့။ ကျွန်မကောလိပ်ထံသို့ လာ. ကိုယ့်တစ်ဦးအလွန်အလွန်ကိုပစ်မှတ်ထား Two-prong ချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကုသပေးဖို့စီမံခန့်ခွဲသည်အထိ 18 မှာငါအခြေခံအားဖြင့်4န်းကျင်နှစ်ပေါင်းအဘို့အကြှနျုပျ၏လိင်တံ၏ function ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
ငါ d2l ကြိုတင်နဲ့ post Synaptic receptors rewire နှင့် upregulate ဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်နှင့် D1 receptors သူတို့အား arousal များအတွက်တာဝန်ရှိသူများဖြစ်ကြသည်ကတည်းက (ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ဘီလီယံခန့်အချက်များပေမယ့်ဒီနှစ်ခု receptors ရှိပါတယ်၏-ဟုတ်ပါတယ်, neuroscience ၏ကျောင်းသားတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်မဖြစ်နားလည်သဘောပေါက် ) ကိုအများဆုံးဝေဖန်။
ငါစညျးမဉျြးဥပ-Up နှင့် dopamine ဖန်တီးခြင်းအားဖြင့် (3 လအတွင်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ငါ့ကိုခဲယဉ်း reboot2နှစ်သို့မဟုတ်ဒီတော့ကျော်ပွုပါပွီမညျ့နညျးလမျး Reboot လုပ်သွားအကြောင်း, ကိုယ့်ကိုဖန်ဆင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖွဲ့အစီအမံကို အသုံးပြု. (သာအစစ်အမှန်ဘဝလိင်နှင့်အတူဒွန်တွဲ) တစ်ခက် reboot လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည် d2l ကြိုတင်နဲ့ post Synaptic receptors နှင့်တက်-ထိန်းညှိ D1 receptors) ။ ၏သင်တန်း, ထိုရှည်လျားသောများအတွက်ခက်ခဲ reboot အလွန့်အလွန်ခက်ခဲသည်နဲ့ကျွန်မအများကြီးတိုးတက်မှုမရှိဘဲအချိန်မရွေး9လကြာ Reboot လုပ်သွားပါတယ်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုသည်။
အကြှနျုပျ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဖြစ်ကောင်းစွာသတ္တုတွင်း၏မရေမတွက်နိုင်တဲ့မိတ်ဆွေများကိုအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်သောရောဂါပျောက်ကင်း, Uridine ပေါင်းစပ်ခဲ့ sulbutamine, shilajit နှင့် Forskolin .. ထိုအပါဝင်ပစ္စည်းများများအတွက်ဥပဒေကြမ်းကြီးမားခဲ့ပါတယ်, ဤ hellhole ထဲကတက်ရဲ့တစ်စုံတစ်ဦးအဖြစ်ကိုယ့်အိုင်ဒီနေသေးတယ် ကမ္ဘာကြီးနဲ့ငါ့ဇာတ်လမ်းဝေမျှနှင့်ငါ့ပုံသေနည်းလွတ်လပ်စွာရရှိနိုင်ပါစေ။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ကုန်ကျစရိတ်စိတ်ပျက်ဖွယ်ခဲ့ကြပြီးညာဘက်ကိုပုံစံများခဲ့ကြသည်သေချာငွီးငှေ့ဖှယျကြီး, ဒါကြောင့်ကိုယ့်ဖော်မြူလာကို pre-ပုလင်းများနှင့်တစ်ဦးမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့မှာတန်ဖိုးနည်းစျေးနှုန်းမရရှိနိုင်ပါအောင်နေဖြင့်နေဆဲ PIED နှင့်အတူမင်္ဂလာဖြစ်စေသူတို့အဘို့လွယ်ကူစေရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့စျေးကိုအဆမတန်မြှဖြစ်လိမ့်မည်သော်လည်း i "Reboot" ဟုခေါ်သောသောဖော်မြူလာ, အောင်နှင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုအပေါ်ကြိုးစားရန်မည်သူမဆိုများအတွက်လွတ်လပ်စွာရရှိနိုင်ပါသည်။
ငါသည်လည်းကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အအလုပ်လုပ်တဲ့ rewiring သေချာစေရန် cialis နှင့်ဆေးညွှန်းမူးယစ်ဆေးတစ်ခု Extreme အစွမ်းထက်အခြားရွေးချယ်စရာကိုရှာဖွေနိုင်ခဲ့သည်။ ငါမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဆိုဒီယမ်အက်စ်ကောဘစ်, ကြက်သွန်ဖြူထုတ်ယူ, citrulline, ornithine, မိုင်နိုအက်စစ်နှင့်စပျစ်သီးကိုအမြိုးအနှယျထုတ်ယူအသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါပါဝင်ပစ္စည်းများမရေမတွက်နိုင်သောလက်တွေ့လေ့လာမှုများအတွက်လုပ်ဖို့သက်သေပြခဲ့ကြသကဲ့သို့ဤအခြေခံအားဖြင့်, Overdrive သို့ NO ထုတ်လုပ်မှုသွားပါသည်။ အားကစားခန်းမများအတွက်စူပါအဖြစ်ကောင်းစွာ။ ငါ၏အပုံသေနည်းစေရန်မည်သူမဆိုများအတွက်လွတ်လပ်စွာရရှိနိုင်စဉ်ကဤပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ကုန်ကျစရိတ်, ဒါကြောင့်စိတ်ပျက်ဖွယ်နှင့်ဖြစ်ခဲ့သည်ကိုတဖန်, ငါသည်တစ်ဦးမှာတန်ဖိုးနည်းစျေးနှုန်းမှာတစ်ဦး Pre-ပုလင်းအမှုန့် version ကိုဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်လူများလုပ်ရတဲ့ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြပါတယ်။ ငါ '' rewire '' ကိုခေါ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒါကအထူးသဖြင့်ပုံသေနည်း။
Ginkgo Biloba တိုင်းရင်းဆေးပင်ထုတ်ယူကြွက်များတွင် noncontact စိုက်ထူပိုကောင်းစေပါတယ်: အ paraventricular နျူကလိယအတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကိုနှင့် mesolimbic စနစ် (2011)
ငါးအဆီအောက်ပိုင်းတော့ပူပန်ကနေအိုမီဂါ-3 fatty acid, တစ်ဦးက Non-လူ့မျောက်အတွက်သိမှု Functions များပိုမိုကောင်းမွန်စေမ